April 2014 - Page3of5- Myanmar News Plus
လက်တင် နှင့် ကိုရီယားစတိုင် fusion ကင်ချီထမင်းကြော် ချက်နည်းလေးပါ။ လုပ်ရတာလည်း လွယ်ပြီ အရမ်းလည်း စားလို့ ကောင်းပါတယ်။ ခုပဲ တူတူ ကြော်ကြည့်ရအောင်… ပါဝင်ပစ္စည်းများ ချက်ပြီသား ထမင်း – ၄ယောက်စာဝက်သားသုံးထပ်သား – ၂၀၀ ဂရမ်ကင်ချီ – ခွက်တ၀က် (ပါးပါးလှီးပါ)ပဲသီး – ခွက် ၄ပုံ၁ပုံရွှေပဲ – ခွက် ၄ပုံ၁ပုံပဲငံပြာရည် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်းဆား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်းသကြား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ပုံ၁ပုံကြက်သွန်ဖြူ – ၂မွှာ (ပါးပါးလှီးပါ)နှမ်း – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်းကြက်ဥ – ၃လုံး (ဆား၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်ဖြူးပြီ မကျက်တကျက် ကြော်ထားပါ)ကြက်သွန်မြိတ် – ၁စည်း (ပါးပါးလှီးပါ)ဟင်းရွက်ဆီ […]
အုန်းထမင်းနှင့် ကြက်သားဟင်းက မြန်မာရိုးရာ ဟင်းလျာတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပြီ လုပ်ရလည်း အရမ်းလွယ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ချက်နည်းလေးကို တူတူကြည့်ရအောင်… ကြက်သားဟင်းအတွက် ပါဝင်ပစ္စည်းများ ၁။ ကြက်သား – ၄၀ကျပ်သား (အတုံးကြီးများ တုံးပါ) ၂။ ကြက်သွန်နီ – ၆လုံး (နှုတ်နှုတ်စဉ်းပါ) ၃။ ကြက်သွန်ဖြူ – ၄မွှာ (နှုတ်နှုတ်စဉ်းပါ) ၄။ ဂျင်း – လက်တဆစ် (နှုတ်နှုတ်စဉ်း အရည်ညှစ်ပါ) ၅။ အရောင်တင်မှုန့် (ငရုတ်သီးမှုန့်) – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်း ၆။ ဆား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်း ရ။ ကြက်သားမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်း ၈။ နံနံပင် – ၁စည်း ကြက်သားဟင်း […]
ငယ်ငယ်က စမ်းချောင်းခရုမည်း လေးတွေစားဖူး သည်..။အရည်စပ်စပ်ပုံစံမျိုးနှင့် ဆန်လှော်ထည့် ထား တဲ့အနှစ် ခပ်ပျစ်ပျစ်ပုံစံမျိုး ၊ ဖေဖေ့မိတ်ဆွေ တစ်ဦးကျောက်မဲ ၊ မိုင်းလုံကလာ တိုင်း..ထိုခရု အမည်းရောင်လေးတွေလက်ဆောင် ယူလာတတ် သည်…။ မေမေချက်ပြောတာကတော့ရိုးရှင်းတဲ့ ရှမ်းရိုးရာဟင်းပုံစံမျိုး….။ ခရုဆန်လှော်ဟင်း စမ်းချောင်းခရုမည်း…………………၂ ဗူး (နို.ဆီဗူး)ဆန်လှော်မှုန်. ………………………၃ ဇွန်း( ထမင်းစားဇွန်း)ဆူးပုတ်……………………………..၁ စည်းကြက်သွန်နီ…………………………၁ လုံးကြက်သွန်ဖြူ………………………..၅ တက်စပါးလင်…………………………….၁ ပင်ဆား+ ဟင်းခတ်မှုန်. ………………သင့်တော်သလိုငရုတ်ကောင်းမှုန်. …………………အနည်းငယ်ခရုမည်းလေးတွေကို သွားပွတ်တံလေးအသုံးပြု ပြီး သန်.စင်နေအောင်ဆေးပါ( ရွှံ.နှင့် ရေညှိ သန်.စင်စေရန် ) သံပုရာသီးတစ်စိတ်လောက်ညှစ် ၊ ဆားအနည်းငယ်ထည့်ပြီး ခေတ္တနှပ်ထားပါကြက်သွန်နီ ၊ ဖြူ ၊ […]
ခရမ်းသီးမီးဖုတ် အပျိုကြီးသုပ်၊ မရန်းသီး ဆတ်စလူးထောင်း…
အိမ်ထမင်း အိမ်ဟင်းကို လွမ်းနေတဲ့သူတွေ၊ စားနေကျ ဆိုင်ချက်ထမင်းဟင်းတွေကို ငြီးငွေ့နေသူတွေ၊ အိမ်မှာ ထမင်းဟင်းချက်ပြုတ် စားဖို့ အချိန်မရလောက်အောင် အလုပ်များနေ သူတွေ၊ ပြီးတော့ မြန်မာပီပီ မြန်မာထမင်း ဟင်းကိုမှ ခံတွင်းတွေ့မက်မောပါတယ်ဆိုသူတွေကို လက်တို့ ချင်တဲ့ ဆိုင်လေးတဆိုင်ရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ အဓိပတိ မြန်မာထမင်းဆိုင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်က အမှတ် (၃၂၁/ဒီ)၊ ရွှေဂုံတိုင်လမ်းမကြီး၊ ရွှေဂုံတိုင် SSC အထူးကုဆေးရုံကြီး နံဘေးမှာရှိပါတယ်။ ဆိုင်ရှေ့ကိုရောက်လို့ ဆိုင်ရဲ့ရှေ့ဘက် မျက်နှာစာမှာ ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ ဝှိုက်ဘုတ်ပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့ ဟင်းအမည်နာမည်တွေကို ဖတ်မိတာနဲ့ သွားရည်မကျမိခင် အရင်ဆုံး ပြုံးတော့ ပြုံးမိသွားပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီဆိုင်းဘုတ်မှာ ရေးထားတာတဲ့ ဟင်းအမည်တွေက ငါးပတ်ချဉ်ရည် ယောက္ခမချက်၊ မန်ကျည်းရွက် ခယ်မသုပ်၊ ခရမ်းသီးမီးဖုတ် အပျိုကြီးသုပ်၊ မရန်းသီးဆတ်စလူးထောင်း၊ ကြက်ဘူး […]
ကရင်လိုတော့ တာ့လ့ဘော့လို့ ခေါ်တဲ့ တာလပေါ ဟင်းချိုပါ။ တာလပေါဟင်းချိုမှာ ဟင်းရွက်၊ ငါး၊ မျှစ်တို့ကို အဓိက ထည့်ချက်ပါတယ်။ ထို့ပြင် ငါး တစ်မျိုးထဲ မဟုတ်ပဲ ပုဇွန် နဲ့ တခြားပင်လယ်စာတွေ လည်း ထည့်ချက်လို့ရပါတယ်။ ဟင်းရွက်ကို တောထဲမှာ ရှာတွေ့တဲ့ အရွက်ကို ထည့်ချက်လေ့ရှိတာမို့ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ အရွက်ကို ထည့်ချက်နိုင်ပါတယ်။ ၀တ်ရည် အိမ် သားတွေက ဒညင်းသီးကြိုက်တာမို့ တာလပေါ ဟင်းချိုထဲမှာ ဒညင်းသီးပါ ထည့်ချက်ထားပါ။ အရသာကောင်းပြီ ထမင်းမြိန်စေမယ့် တာလပေါဟင်းချိုကို ခုပဲ ချက်ရအောင်… ပါဝင်ပစ္စည်းများ ငါးခူး (သို့) ငါးရံ့ – ၁၅ကျပ်သားဆန် – ခွက်ဝက်မျှစ် – ၁၀ကျပ်သား (ရေဖြင့်ပြုတ်ပြီ အရှည်လှီးထားပါ)ဒညှင်းသီး – ၁၀လုံး […]
မရိုးမအီတဲ့ ၀က်နံရိုး နဲ့ ကြံမဆိုင်အရည်သောက်ချက်ကြမယ်
၀က်နံရိုး ကြံမဆိုင်ဟင်းချို အရည်သောက်လေးပါ။ ကြံမဆိုင်အပြင် တခြား ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေပါ ထည့်ချက် ထားသည်မို့ တမူထူးခြားပြီ သောက်လို့ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ၀က်နံရိုးကလည်း နူအိပြီ ချိုချဉ် အရသာလေးကို ရရှိမှာပါ။ တူတူချက်ကြည့် ရအောင်… ပါဝင်ပစ္စည်းများ ၀က်နံရိုး – ၃၀ ကျပ်သား (၁လက်မအရွယ် ပိုင်းဖြတ်ပါ)ကြံမဆိုင် – ၁ထုပ် (ရေစင်အောင် ဆေးပြီ ၂လက်မအရွယ်များ ပိုင်းဖြတ်ပါ)ခရမ်းချဉ်သီး – ၂လုံး (အစေ့ထုတ်ပြီ ၈စိပ်စိပ်ပါ)ပန်းပွင့် – တစိတ် (အတုံးသေးများ တုံးပါ)ပဲပြား – ၁တုံး (အတုံးများ တုံးပါ)ဘိုစားပဲ – ၅ခု (အရှည် အစောင်းလှီးပါ)ပြောင်းဖူးသေး – ၄ခု (အရှည်အစောင်းလှီးပါ)ကြက်သွန်မြိတ် – စည်းဝက် (အရှည်အစောင်းလှီးပါ)သံပရာသီး – ၂လုံး […]
မော်လမြိုင် မုန့်ဟင်းခါးလဲ ချက်စားကြည့်ရအောင်
သင်္ကြန် အကြိုနေ့အတွက် မော်လမြိုင် မုန့်ဟင်း ခါးပါ။ မော်လမြိုင် မုန့်ဟင်းခါးက ဆီနည်းနည်း၊ ဟင်းရည် ခပ်ကျဲကျဲနဲ့မို့ ရန်ကုန်မုန့်ဟင်းခါးနဲ့တော့ မတူပေမယ့် တမျိုး စားလို့ ကောင်းပါတယ်။ ထူးထူးခြားခြား ငါးပြုတ်ရည်ထဲ ထန်းညက်ခဲ ထည့်ပြီ ပြုတ်ရတာပါ။ မော်လမြိုင် မုန့်ဟင်းခါးအတွက် ပါဝင်ပစ္စည်းများ ၁။ မုန့်ဟင်းခါးဖတ် – ၄၀ကျပ်သား ၂။ ငါးခူ – ၃၀ ကျပ်သား (ငါးခူကို ထန်းညက် ၃ခဲ၊ ငါးငံပြာရည်၊ ဆား၊ စပါးလင်တို့ဖြင့် ပြုတ်ရမည်) ၃။ ငပျောအူ – ၁ပင် (အရင့်များဖယ်ပြီ အနုများကို ပါးပါးလှီးပြီလျှင် ဆနွင်း(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း)ထည့်ကာ ရေရော စိမ်ထားပေးပါ) မှတ်ချက် ။ ။ ဆနွင်းစိမ်ခြင်းမှာ ငပျောအူများ […]
တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းလေး တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဖရဲသီးမှာ ရေဓာတ်များစွာပါဝင်လို့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ဘေးထွက်ဆိုကျိုး မရှိစေပါဘူး။ ဖရဲသီးကို ဖျော်ရည်လုပ်ကာ နေ့လယ် ထမင်းမစား ခင်နှင့် မနက်စာ မစားခင် အချိန်တွေ မှာ သောက်ပေးပါက ဝိတ်ကျစေနိုင် ပါတယ်။ သောက်ရမယ့် ပမာဏကတော့ အတိအကျ သတ်မှတ် မထားပါဘူး။ များများသောက်လျင် မြန်မြန်ဝိတ်ကျစေနိုင် ပါတယ်။ ဖရဲသီဟာ ရေဓာတ်များစွာ ပါဝင်လို့ စားသမျှ အစားအစာတွေကို အဆီတွေ မဖြစ်စေဘဲ ဆီထဲသို့ ပါသွားစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျော်လင်းနိုင် | ကျန်းမာရေးနှင့် အလှအပ သတင်းများ